Internet Essentials-ka Comcast
Intarneedka guriga ee dheeraynaaya, la isku hallayn karo, oo LACAG-LA'AANA!
Hel Internet Essentials
Caawi oo kaalmee Afka Astaanta ee Maraykanka
Kooxda Caawinta ASL ayaa kaa caawin doonta su'aalaha iyo arrimaha ku saabsan codsiga Internet Essentials iyo siyaalaha u-qalmashada.
Kaliya guji badhankaan si aad u bilawdo:
Kooxda Caawinta ee ASL baa kaa caawin doonta codsiga Internet Essentials iyo Siyaalaha u-qalmashada.
Natiijooyin u goob:
Xog Caawimeed Dheeri ah
Ma haysataa qiyaarka sheekaysiga ee dadka dhagaha culus?
Haddii aad doonayso inaad qof ku la sheekaysato ASL (Afka Astaamaha ee Maraykanka) si aad u gudbiso codsi guji halkaan:
Kaalmada ASL waxaa la helayaa Isniinta ilaa Jimcaha inta u dhaxeysa saacadaha 1:00 PM ilaa 9:00 PM EST.
Goobtaadu ma ku habboon tahay aqristayaasha shaashadda?
Haa, goobta Internet Essentials waxaa loo habeeyay inay ku habboonaato aqristayaasha shaashadda ee dadka indhaha wax ka qabas.
Ma ku haysataa Braille waxyaalo daabacan?
Waxaa Partner Portal/kayaga laga helayaa Braille iyo qoraallo daabacan iyo qormooyin xayaysiin. Fadlan guji xiriiriyaha hoose si aad u hesho waxyaalahaan (waa la dalbi karaa oo la soo rari karaa iyadoo ku xiran nooca walaxa).
Haddii aad markii ugu horreysay galayso Partner Portal waxaad u baahan doontaa inaad is diiwaan galiso si aad u gaarto goobta.
Braille iyo waxyaalo daabac oo baaxad leh ayaa ku jira Partner Portal
Waa maxay ilaha ay Xfinity u haysaa adeegsada-yaasha curyaamada?
Si aad wax uga sii ogaato qiyaarrada gelitaanka Xfinity, guji xiriiriyaha hoose:
Bogga Gelitaanka Xfinity
Maxay yihiin furayaasha doorka ee aqristaha shaashadda caadiga ee ku-gooshka barta interneedka?
Comcast waxay ka caawisaa aqristayaasha shaashadda VoiceOver si looga kaalmeeyo ku-gooshitaanka bogagga barta interneedka.
Halkaan u guji liiska Aqristayaasha Shaashadda Caadiga ee Furayaasha doorka ee Kugooshka Barta Interneedka
Waxaad u qalmi karta adeeg Internet bille ah oo lacag-la'aana*
Comcast waxay ku faraxsan tahay inay wax la wadaagto Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban. Eeg sida aad ugu qalmi karto adeegga Internet-ka billaha ah ee LACAG-LA'AANTA ee la xiriira Waxtarka Internet-ka Fedaraalka ee waqtiga kooban.
* Canshuuro iyo khidmado dheeri ah
Ma waxaad hubinaysaa xaaladda codsigaagii Internet Essentials? Ma waxaad jawaabo u rabtaa su'aalo aad qabto? Hoos guji si aad u aragto su'aalaha aalaa la is weyddiiyo.
Baraha - Kulkulul ee WiFi-ga
Haleelitaanka WiFi guriga gudihiisa ee baraha-kulkulul ee WiFi-da Xifinity, waxaa weheliya inuu ku jiro Internet Essentials.
Internet Essentials hadda waa labo jibbaar xagga dhoqsaha! ilaa50/10 Mbps
• Ku fiican shaqaynta iyo guri wax-kubarashada
• Filimmo qulqulaaya iyo bandhigyo
• Muusik soo-dejin
• Fiidiyow kuwicitaanka aalado badan oo isku mar ah
Meeshaada ka goob ilo aaggaasa
Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.
Fadlan geli Afgaradka Aaggaaga.
Fadlan geli Afgarad Aageed shaqaynaaya.
Si gaar ah baan ugu mahadnaqaynnaa Wadaaga-yaashayada
Caawi oo fidi erayga
U=doodayaasha aan leenahay ee ugu waaweyn waa kuwa fidiya warka barnaamijkayaga. Wadaage diiwaansan ahaan, waxaad awoodi doontaa inaad daw u yeelato walxaha iyo ilaha si aad u gaarto oo loogu qeybiyo bulshadaada Dhammaan walxaha barnaamijka, kuwaas oo ku diyaarsan 16 afaf kale duwan, waa wada dheeri adigaana si toosa oo lacag la'aana laguu soo diri doonaa.